प्रदेश नं ६ मा को बन्ला मुख्यमन्त्री महेन्द्र कि नरेश ? आकांक्षीहरु धेरै-निर्णयमा पुग्न समस्या ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रदेश नं ६ मा को बन्ला मुख्यमन्त्री महेन्द्र कि नरेश ? आकांक्षीहरु धेरै-निर्णयमा पुग्न समस्या !
प्रकाशित मिति २३ माघ २०७४, मंगलवार ०८:०० लेखक नेपालीजनता
सुर्खेत । प्रदेश नं ६ मा राजनीतिक दलका नेताहरु संसदीय दलको नेता चयन गर्न क्रियाशील रहेपनि आकांक्षीहरु धेरै हुँदा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश नं ६ को पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि दलहरुले संसदीय दलको नेता चुन्न आन्तरिक गृहकार्यमा क्रियाशील बनेका छन् । यो प्रदेशमा नेकपा ९एमाले०ले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।
वाम गठबन्धनभित्रका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश सरकार गठन तथा संसदीय दलको नेताको नाम टुङ्गो लगाउन कठिन भएको छ । यी दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेको भागमा सभामुख र माओवादी केन्द्रको भागमा मुख्यमन्त्री परेको छ ।
आकांक्षीहरु बढेपछि संसदीय दलको पदाधिकारीका उम्मेदवार चयन गर्न पनि त्यत्तिकै सकस परेको छ । प्रथमतः संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरिने माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णा शाहले जानकारी दिए । ‘लगत्तै राष्ट्रियसभाको चुनाव भएकाले केही ढिला भएको हो, छिट्टै संसदीय दलको नेता तथा अन्य पदाधिकारी चयन गर्छौं’, उनले भने ।
माओवादीभित्र संसदीय दलको नेताका लागि जुम्ला प्रदेश क का प्रदेश सांसद नरेश भण्डारी र कालीकोटका प्रदेश ख प्रदेश सांसद तथा निवर्तमान ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रदेश नं ६ मा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र धेरै आकांक्षीका कारण सरकार तथा संसदीय दलको नेता तथा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया लम्बिएको हो । प्रदेशसभाका बैठकले सभामुखको चयनको मुख्य कार्यसूची तय गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा समेत छलफल प्रारम्भ भएको छ । बाम गठबन्धनमा सभामुखका लागि यो प्रदेशमा एमाले र उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ ।
सभामुखमा एमालेबाट हेभिवेटका नेताले खासै इच्छा देखाएका छैनन् । यसअघिको संसदीय दलको बैठकबाट माओवादीलाई मुख्यमन्त्री नछोड्ने निर्णय गरेको एमालेले पार्टी केन्द्रको निर्णय बमोजिम माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री छोड्ने भएको हो ।
एमालेभित्र दलको नेताको टुङ्गो नलागी सभामुखको टुङ्गो नलाग्ने देखिएको छ । एमालेका हेभिवेटका सांसदहरु यमलाल कँडेल र प्रकाश ज्वालाले सभामुखभन्दा संसदीय दलको नेतामा बढी आकांक्षी भएकाले सभामुखको उम्मेदवार टुङ्गो नलागेको बताइएको छ ।
वरिष्ठ नेताको ध्यान दलको नेतामा भएकाले सभामुखमा भने एमाले मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले दाबी गरेका छन् । ‘एकपटक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिसकेकाले मेरो दाबी सभामुखमा रहेको छ’, शाहीले भने ।
माओवादी केन्द्रले भने उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ । उपसभामुख चयनका सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको र केही दिनभित्रै उम्मेदवार चयन गरिने माओवादी केन्द्रका ६ नं प्रदेशका संयोजक मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
एमालेले सभामुखको नाम टुङ्गो लगाएपछि आफूहरुले पनि उपसभामुखको उम्मेदवार टुङ्ग्याउने शर्माले बताए ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपसभामुखमा रुकुमकी सांसद विमला केसी, सुर्खेतकी सांसद सीता नेपाली र जाजरकोटकी सांसद कृष्णा शाहले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । सबैभन्दा कान्छो प्रदेशका रुपमा रहेको यो प्रदेशमा यही माघ २९ गते सभामुख चयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
लागूऔषध प्रयोगले तहसनहस हुँदै युवा–युवतीको जीवन
काठमाडाैं । कलेज पढदै गरेको छोराले अस्वाभाविक गतिविधि गर्न थाले पनि यहाँका एक दम्पतीले सुरुमा उति वास्ता गरेनन्।
आफ्नै भतिजीसँग यौन सम्बन्ध राख्ने हिटलरको यस्तो छ यौनसम्बन्धी गोप्य रहस्य !
काठमाडौँ । विश्वकै सबै भन्दा ठूला तानाशाही मानिने हिटलरको अप्रिल २० मा जन्मदिन परेको थियो। उनको जन्म १८८९ अप्रिल…
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गृहजिल्लाका सुरक्षा प्रमुख क्रिष्टजेन नेल्सेनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सुरक्षा प्रमुख नेल्सेनले…
ढुंगामा भविष्य खोज्दै बालबालिका
संखुवासभा । १३ वर्षीया जुना र ११ वर्षीया लक्ष्मी तामाङका हत्केलाभरि ठेलै ठेला छन् । पढाइ छुटेपछि यी दिदीबहिनीका…
कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा मंगलबारदेखि फेसबुक बन्द
जनताको कामभन्दा फेसबुकमा कर्मचारी व्यस्त हुन थालेपछि प्रदेश…
सुत्केरीलाई २२ करोड, सडकमा माग्न नपाइने
काठमाडौं । सरकारले जोखिममा परेका सुत्केरीको तत्कालै उद्धार गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले त्यसको लागि २२ करोड…